Ngokumangalisayo: Ngenisa i-LinkedIn kwiNdawo yokuHamba ngokuLungileyo, eSebenzayo eyiSelfowuni | Martech Zone
Ngokumangalisayo: Ngenisa i-LinkedIn kwiNdawo entle, eSebenzayo yokuPhucula iZiza
NgoLwesithathu, Julayi 16, 2014 NgeCawa, nge-15 kaJanuwari 2017 Douglas Karr
Kukho amaxesha apho ungadingi ukuchitha amawaka eedola kwisiza esitsha-ufuna nje isibambi ndawo kwipotifoliyo ekwi-intanethi, iphepha lemveliso elilula okanye ukubonisa i-intanethi yakho kwakhona. Ngokukrakra unikezela isisombululo esisingathiweyo apho unokwakha khona ii-3 ezilungiselelwe mobile, iisayithi ezintle ezingaphantsi kwe- $ 100 ngonyaka.
Ngqongqo yinkonzo ekwi-Intanethi eyenza ukuba kube lula kakhulu kuwe ukuba wakhe iwebhusayithi entle, ephuculweyo yeselula ngemizuzu. Kwishishini lakho, iprojekthi, okanye uphawu lomntu, indawo ekhangeleka inomtsalane iyimfuneko kubukho bakho kwi-Intanethi kunye nokuba semthethweni kwi-Mobile Age. Ngaphandle kokufaka iikhowudi okanye uyilo konke konke, unokuseta iwebhusayithi enobuchule ekhangeleka intle kwifowuni yakho, ithebhulethi, kunye nekhompyuter kwimizuzu!
Martech Zone Abafundi: Gcina iipesenti ezili-10 nge-PROMOCODE: LAUNCH10OFF kwaye ufumane isicwangciso se-PRO esimangazayo esisezantsi njenge- $ 18 ngenyanga!
Zonke iisayithi zisebenzisa umhleli olula we-Strikingly apho unokukhangela kuzo zonke iitemplate zazo:
Inqaku elinye elinomtsalane kukukwazi ukwakha indawo yakho yobuqu ngokuqhagamshela kwi-LinkedIn. Indawo ingenisa lonke ulwazi lwakho:
Ungasebenzisa umhleli wabo olula ukuguqula naziphi na izinto (uhlobo lwasimahla lilinganiselwe ngokuthelekiswa nohlobo oluhlawulelweyo):
Kwaye kumcimbi wamaxesha, unewebhusayithi yakho ekufanele ukuba wabelane ngayo kunye neselfowuni!
Ukubhengezwa: Siyinxalenye ye Ngqongqo kwaye sisebenzise amakhonkco onxibelelwano kuyo yonke le post.
tags: CMSInkqubo yolawulo lomxholoIndawo yomnyhadalaukungenisa ngaphakathiindawo ye-linkinmobile ephendulayoisayithi yeselulaiphepha elinyeindawo yepotifoliyoIndawo yemvelisonoluphendulayoiwebhusayithi ephendulayongokubethayo